Sophora Japonica निकासी आपूर्तिकर्ता, Bolise बाट निर्माताहरु
[ल्याटिन नाम] Sophora japonica लिन।
[सक्रिय सामग्री] Quercetin, Luteolin, Rutin
[परीक्षण विधि] HPLC
[उपस्थिति] हल्का खैरो पहेंलो पाउडर
1. संक्रामक रोगहरु को प्रतिरोध बढाउन सक्छ;
२. रोकथाम र गम रगत बग्ने उपचार गर्न मद्दत गर्दछ
३. कायम र सामान्य केशिका प्रतिरोध बृद्धि, यसको पारगम्यता कम
4. दुखाई, टक्कर र घाउ, एक जीवाणुरोधी प्रभाव छ छुटकारा पाउन मद्दत गर्छ;
Sophora Japonica निकाल्ने को बारेमा
Sophora japonica Sophora japonica को एक फूल कली हो, जुन चामल को एक दाना जस्तै हो जब यसको फूल फुलेको छैन। फ्राइड पहेंलो पानी धेरै ताजा छ। Huaimi रगत चिसो र रक्तस्राव रोक्न, कलेजो सफा र आगो सफा गर्ने प्रभाव छ।
Sophora Japonica निकाल्ने खाद्य क्षेत्र मा लागू गरीन्छ, यो मुख्य रूप बाट पेय पदार्थ, रक्सी र खाद्य पदार्थ को प्रकार मा मानव प्रतिरक्षा र विरोधी बुढेसकाल बढाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ।
मोब / व्हाट्सएप / WeChat: + +86 १ 19859184872 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX०XNUMX
प्रतिलिपि अधिकार © बोलिसे कं, लिमिटेड। www.bkherb.com सबै अधिकार सुरक्षित जडिबुटीहरू पौष्टिक सामग्रीहरू दायित्व छुट सूचना